သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကြည်လင်တဲ့နေ့
ညတွေမှာ ခြံတွေထဲက အလှမီးလေးတွေက တဖျတ်ဖျတ်လင်းလာကြတယ်။ သစ်ရွက်ကြွေတွေ လေနဲ့လွင့်သွားသံတွေနဲ့အတူ အိမ်တွေထဲက ပျံ့လွင့်လာတဲ့ သီချင်းသံလေးတွေကို ကြားနေရတယ်။
လမ်းမတွေပေါ်မှာ လူငယ်လေးတွေ လမ်းသလားနေကြတယ်။
အချို့တွေကလဲ မိဘတွေရဲ့ အမိုးပွင့်ကားတွေကို စက်သံပေးပြီး လူးလာခေါက်တုံ့ မောင်းနေကြတယ်။
ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ နွေရာသီကို ခုလိုငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်လို့ စာဖွဲ့နေချင်တယ်။
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ ဒီသီချင်းကို ရုံးအသွား မိုးတွေတ၀ုန်းဒိုင်းဒိုင်းရွာတဲ့နေ့မှာ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတွေကနေ တမင်လွှင့်ပေးတတ်တယ်။
နားထောင်သူအချို့က အသံလွှင့်ရုံတွေကို ဖုန်းခေါ်ပြီး နောက်နေတာလားဟင်... လို့ မေးတတ်ကြတယ်။
အသံလွှင့်တဲ့ လူက အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ သဘောကျပြီး အော်ရယ်တတ်တယ်။
ကင်မရာဓာတ်ခဲကုန်နေလို့ အနီးစပ်ဆုံးတူတဲ့ ပုံတွေကို ဂူဂဲလ်မှ ကူးယူဝေမျှထားပါတယ်။
Haveagreat summer time! Enjoy it.
Comment by lynda — June 1, 2009 @ 5:50 pm
Comment by Phyo Evergreen — June 1, 2009 @ 6:20 pm
နွေကြို သတိုးသမီးက မအိမ့်ချမ်းမြေ့ ဖြစ်ပုံရတယ်။ နွေကြိုပန်းတွေနဲ့အတူ သံစဉ်မဲ့ အင်္လကာတေးသွားက ကကုန်လို့နေတယ်။ သူ့ကိုပေါ့ ကြည်လင်တဲ့နေ့ တစ်နေ့မှာ လစ်ခနဲ လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။
Comment by ရှေးစာဆို — June 1, 2009 @ 7:30 pm
ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲ ငြိမ်းချမ်းအေးမြသွားတာပဲ အိမ့်ရေ…
“ပတ်ဝန်းကျင်က မြက်ခင်းတွေပေါ်မှာ ယောင်္ကျားတွေက မြက်ရိတ်စက်တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်….
အချို့ကလေးလေးတွေက မြက်ပန်းလေးတွေကို လေနဲ့မှုတ်ပြီး ၀တ်မှုန်လေးတွေကို လိုက်ဖမ်းနေတယ်။”
တဲ့လား။ အားကျလိုက်တာ။ ဒီမှာတော့ အဲဒီလို ဘ၀မျိုးရဖို့ ခက်တယ်လေ။ အခန်းကျဉ်းလေးကို အိမ်လုပ်နေရတာမိုလား။
အိမ့်ရေ… စကားမစပ်… တက်ဂ်ထားတယ်နော်… ရေးပေးပါဦးညီမရေ…
Comment by တန်ခူး — June 1, 2009 @ 9:34 pm
မလေး ပျော်နေပုံပေါက်တယ်.း)
သာယာလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာ နေထိုင်ခွင့်ရတာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းချီးပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဗျာ.
ကျွန်တော့်ဆီမှာတော့ ပူလိုက်အေးလိုက်နဲ့ပဲ မမှန်တဲ့ ရာသီဥတုအောက်မှာ နေတတ်အောင်နေနေရတယ်.
မနေတတ်လို့လည်း မရဘူးလေ. ကိုယ့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်မှ မရှိတော့. ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းနေရတာပေါ့. မဟုတ်ဘူးလား
It’s gonna beabright bright bright bright Sun-shiny day..
အဲဒီ့စာသားလေးတွေ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လေးနက်မှုရှိတယ်နော်. လှတယ်.
ဖြစ်ချင်တော့ တီဗွီကြည့်နေရင်း မလေးဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်မိတာ ပြန်လည်းလှည့်လိုက်ရော တီဗွီထဲမှာလေ သက်တန့်ကြီးတစ်စင်းပေါ်နေတယ်.
ဘရာဇီးလ် အမေဇုံမြစ်က မိကျောင်းတွေအကြောင်းကြည့်နေတာလေ. မြစ်ကြီးပေါ်မှာ သက်တန့်ကြီးပေါ်နေတာများ လှလိုက်တာ.
သက်တန့်တွေအကြောင်းရေးတတ်တဲ့ မလေးကိုတောင် သတိရမိသွားသေးတယ်.
မလေး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နွေဦးကို ဆက်လက်ကြိုဆိုနိုင်ပါစေဗျာ.
Comment by Yan — June 1, 2009 @ 10:33 pm
မလေးက နွေရာသီမှာ ပျော်လား..
ညီမက လေထဲသစ်ရွက်တွေ ၀ဲနေရင် သဘောကျတယ်..
By any chance, you like snow domes, too?
Comment by ShwunMi — June 1, 2009 @ 11:29 pm
ကျွန်တော်လည်း ထင်ထင်ရှားရှား သိသိသာသာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ပါပြီ ခင်ဗျ
Comment by ကျား — June 2, 2009 @ 10:17 am
lynda.. လင်ဒါက ကယ်လီဖိုးနီးယားကလားဟင်.. ဒီဘက်မှာဆောင်းကျရင် မလေး အဲ့ဘက်ကို ပြောင်းပြေးချင်တယ်။ နွေဆိုရင်တော့ ဒီမြို့လေးကနေ ဘယ်မှ မသွားချင်ဘူး။
Phyo Evergreen .. ဖန်းပေါင်းချောင်ထဲ နွေကိုထည့်ထားချင်တာကလွဲလို့ အခုတောင် ဟိုဘက်အိမ်က မဆလာဟင်းနံ့သင်းလို့မောင်လေးရဲ့
ရှေးစာဆို .. နွေကိုကြိုပြီးရင် နွေရောဂါလာတော့မယ်ထင်ရဲ့
တန်ခူး.. တကယ်လဲ မြက်တွေရိတ်ရ နှုတ်ရကော.. အကုန်လုံးသား သိုင်းကစားသလို ဓားနဲ့မွှေ့ယမ်းချင်စိတ်ပေါက်မယ် မ.. ရေ
Yan .. ဒီနှစ်တော့ တော်တော်လေး နွေကိုတန်ဘိုးထားနေမိတယ်။ စနေနေ့ကတောင် နေပူပူကြီး သက်တန့်ထွက်နေသေးတယ် ကိုရန်။
ရွှန်းမီ... လေပြင်းပြင်း ကညင်ပင်တို့ ကုက္ကိုလ်ပင်အောက်တို့မှာ ထိုင်နေရတာလဲကြိုက်တယ်။ snow domes လေးတွေလဲ ကြိုက်တာပဲညီမ။ လွင့်နေတဲ့ အရောင်လက်လက်လေးတွေကိုငေးကြည့်ရင်း စိတ်ကူးအသစ်လေးတွေ တခါတခါ ပေါ်လာတတ်တယ်။
Comment by မလေး — June 2, 2009 @ 10:21 am
Have you check facebook these days?…I am going back during Midterm Break and we will haveagathering with friends at YGN before I take the next flight to MDY…hee, I can’t wait to see my love ones there…Take care of your health and enjoy the summer time (-:…
Comment by Angel Eyes — June 3, 2009 @ 9:07 am
လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးရက်က တစ်ခေါက်ရောက်တယ် သူငယ်ချင်း… WLLT ရဲ့ ဧရာဝတီပုံတွေမှာ ကော့မန့်ရေးခဲ့သေးတယ်။ သူကတော့ နေ့စဉ်သွားကြည့်တယ် (ထင်တယ်)။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ရဦးမှာ ပျော်စရာကြီး.. ပုံတွေများကြီး ရိုက်ခဲ့ပါ။ KA တို့တွေကို ခေါ်သွားတဲ့ RC2 နားက ရခိုင်ဆိုင်လား ပုစွန်သုတ်ဆိုင်လား အဲဒီက ပုဇွန်သုတ် ကိုယ်စားစားခဲ့ပေးပါ။ အဲဒါကို တစ်ချိန်လုံး ဓာတ်ကျနေတယ် သူငယ်ချင်းရေ…။
Comment by မလေး — June 4, 2009 @ 11:58 am
ဒီတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်မုာလုပ်ဖို့ရှိတာလေးတွေအစပျိုးဖြစ်မယ်သူငယ်ချင်း။SAရဲ့ကျောင်း၊MTYရဲ့စက် တွေလေ့လာရေးသွားဖြစ်မယ်။အပမ်းဖြေတာနဲ့အလုပ်ရောမယ်လေ။ သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ဆိုင်ကိုသွားခဲ့မယ်။အစားဆိုရင်စိတ်ချ…ဟီး -း Comment by Angel Eyes — June 6, 2009 @ 1:17 am
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:24 AM